Fomba fanamafisana mandeha ho azy 5-dingana tsy misy tohiny | Zeevou PMS
Mora ihany ny mahazo famandrihana amin'ny Airbnb. Fanamby ny famerenana ity fanamorana ity amin'ny fantsona hafa sy ny famandrihana mivantana. Ankoatr'izay, be ny tantaran'ny trano rava na dia amin'ny Airbnb aza, satria tsy misy lazain'ny mpampiantrano momba ny fitsirihana ny mpitsidika.
Ny olana faharoa manjaka amin'ny fantsona dia ny fomba fitantanana ny vola. Indraindray mila manangona ny fandoavanao manokana ianao, ary miatrika ny fanantenana hahazo chargebacks. Na dia manangona ny fandoavam-bola avy any amin'ny vahiny aza ny fantsona dia mazàna izy ireo dia tsy mandoa mandra-pahatongan'ny fahatongavany, ka manelingelina ny fikoriananao.
Ankoatr'izay, ny fikirakirana ny petra-bola azo antoka dia mety ho tena sarotra, satria mila miantoka antoka fa manome alalana mialoha ny vola alohan'ny hanomezana ny lakile, ary mbola hanana azy ireo ihany koa ny fisavana aorian'izay raha mahita ny olana ateraky ny vahiny.
Nisy rafitra iray tsy ampy izay ahafahanao mamerina ny fahatsoran'ny famandrihana famandrihana araka ny efa niainanao Airbnb, raha manampy fiarovana fanampiny ho anao mpampiantrano amin'ny alàlan'ny famelana anao hijerena tanteraka ny vahininao alohan'ny hahatongavan'izy ireo.
Ahoana no hanampian'ny Zeevou ny fanodinana mandeha ho azy famandrihana mandeha ho azy?
Zeevou dia namolavola dingana fanamafisana famandrihana 5-dingana tokana izay mandrindra ny fanodinana ny famandrihana rehetra na inona na inona loharano, raha jerena ireo fepetra rehetra efa vita. Ankoatr'izay, miantoka ny fahatanterahan'ny fepetra tsy voavaha izany, alohan'ny hisehoan'ny fizahana. Midika izany fa ny torolàlana momba ny fizahana dia tsy halefa mihitsy raha tsy voaro tanteraka ianao amin'ny maha mpampiantrano anao.
Raha vantany vao tonga any Zeevou ny famandrihana dia alefa amin'ny mailaka ny antsipiriany momba ny fepetra efa vita sy ny dingana mbola miavaka. Ohatra, raha ny famandrihana Airbnb, ny fandoavam-bola sy ny fiarovana dia haseho ho Vita, fa ny dingana rehetra kosa dia homarihina ho miavaka. Ho an'ny vahiny averimberina dia hiseho ny fanamarinana ny vahininy, na izany aza, ny sisa amin'ireo dingana dia mbola mila karakarain'ilay vahiny alohan'ny hanamarihana ny famandrihana ho voamarina.
Ny fanomezana ny drafitry ny zavatra antenainao amin'ny mpitsidika dia eo am-pamandrihana dia misoroka ny fifandirana etsy sy eroa ary ahafahanao manala ireo vahiny manana olana hatramin'ny voalohany. Ny ampahany betsaka amin'ny vahiny manana olana dia hahatakatra fa ny tianao holazaina dia vantany vao mahita ny tadiny izy ireo dia mila mitsambikina mba hahazoana fidirana ary mety hangataka ny hanafoanana ny tenany amin'ity sehatra ity. Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny torohevitray dia ny hamelana azy ireo hanao izany ary hanandrana sy hamidy indray ny alina faran'izay haingana (izahay aza dia namolavola ny Fandaharam-potoana momba ny fanafoanana mba hanampiana anao hamidy indray ny alina raha miandry ny fanafoanana ianao voahodina tanteraka amin'ny fantsona).
Toy ny amin'ny endri-javatra rehetra ao Zeevou, dia manandrana manamboatra ny rafitrao izahay. Amin'ity tranga ity dia midika izany fa afaka manapa-kevitra ianao hoe inona ny dingana amin'ny fikirakirana famandrihana mandeha ho azy tianao hampidirina, ary na ny saha tianao aseho na asio marika aza fa adalan'ny vahininao amin'ny dingana 1. Manome anao fotoana tena izy izahay topy maso isaky ny famandrihana sy amin'ny lisitra fisavana ny haben'ny azon'ny vahiny tamin'ny famitana ny dingana takiana tsirairay.
Dingana 1: Fanangonana ny antsipirian'ny vahiny
Ny dingana voalohany amin'ny Zeevou Book dia ahafahan'ny olona mametraka ny famandrihana hamaritana raha toa ka manao famandrihana ho an'ny tenany izy ireo na amin'ny anaran'ny olon-kafa, ary hamita profil iray na roa. Ao anatin'ny fizotran'ity dingana ity dia manafina ny adiresy mailaka nandefa nalefa tany Zeevou tamin'ny alàlan'ny fantsona izahay, amin'izay dia miantoka ny fisamborana ny adiresy mailaky ny vahiny alohan'ny ahafahan'izy ireo miroso amin'ny dingana manaraka.
Ankoatry ny fanampiana anao hahafantatra ireo mpamandrika ara-barotra, ny endrika fisavana nomerika feno tafiditra ao amin'ity dingana ity - ahafahanao manangona antsipiriany manokana miaraka amin'ny anarana, adiresy, ary nomeraon'ny pasipaoro - dia ahafahanao mahazo fotoana tombanana amin'ny daty fahatongavana ihany koa, fanamarihana haingana sy fanemorana tara -ins, ary koa manangona ny faneken'ny marketing mifanaraka amin'ny GDPR.
Noho izany, Zeevou Book dia ahafahanao manangana tahiry fifandraisana izay azonao ampiasaina amin'ny ho avy ho an'ny fampielezana mailaka handrisihana ny famandrihana mivantana.
Dingana 2: Vahiny fanampiny
Ny dingana faharoa, izay tsy voatery, dia mamela anao hangataka amin'ny vahiny mba hanome fanazavana momba ny vahiny rehetra mipetraka. Ho an'ny vahiny tsirairay izay ampiana, mombamomba ny vahiny dia atsangana ao Zeevou ary mifandraika amin'ny famandrihana. Ity dingana ity dia ahafahanao mampanan-karena bebe kokoa ny angon-drakitra fifandraisanao, ary miaraka amin'izay manome anao antsipiriany momba ny fifandraisana fanampiny raha toa ka manana tranga maika ianao mandritra ny fotoana ijanonanao ary tsy afaka mihazona ny vahiny nasaina. Ny vahiny nasaina dia afaka nanondro fifandraisana voaampy, noho izany dia fantatrao hoe iza ny seranan-tsambo antsoinao voalohany amin'ny tranga toa izany ho an'ny vondrona lehibe.
Mba hialana amin'ny mahamenatra anao dia manasa ny vahiny hanao saina amin'ny mpikambana ao amin'ny antokony izay tsy tokony hifandraisana isika, endri-javatra iray izay azo ampiasaina raha toa ka atao tsy ampoizina ny famandrihana fitsingerenan'ny andro nahaterahana na fitsingerenan'ny mariazy ohatra.
Dingana 3: Rohy azo antoka 3-D ho an'ny fandoavam-bola
Amin'ny dingana fahatelo, ny vahiny dia afaka mampidina faktiora faktiora ho an'ny fijanonany sy hamita ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny rohy 3-D Secure. Izay mombamomba ny karatra ampitampita amin'ny fantsona dia tsy raharahain'i Zeevou raha tsy karatra virtoaly (VCC) izy ireo, satria ny fiampangana ilay teo aloha dia mety hiteraka trosa arahin'alika.
Ny fizotra azo antoka 3-D ampiasaina amin'ny fandoavam-bola rehetra dia midika fa manara-penitra PSD2 i Zeevou. Amin'ny alàlan'ny fampiasana rohy fandoavam-bola miaraka amin'ny 3-D nirehitra, ny vahiny dia mila manaporofo fa izy ireo no tena tompon'ny karatra amin'ny alàlan'ny fampidirana tenimiafina izay nifanarahan'izy ireo tamin'ny mpamoaka karatra azy ireo, na tamin'ny alàlan'ny fampidirana passcode indray mandeha ho fanamarinana. Ity dia azo alefa any amin'izy ireo na amin'ny endrika hafatra an-tsoratra na azo amin'ny alàlan'ny fitaovana nomen'ny banky azy ireo. 3-D Ny fandoavam-bola azo antoka dia manova ny habetsaky ny trosa amin'ny fampiasana karatra tsy nahazoana alàlana avy amin'ny mpivarotra mankany amin'ny mpihazona karatra sy ny mpamatsy karatra azy ireo, hahafahan'ny fanamafisana an-tserasera matanjaka sy ny fihenan'ny risika ara-bola ho anao amin'ny maha-mpampiantrano anao.
Zeevou dia mifangaro amin'ny vavahady fidirana, amin'izay ianao afaka manapa-kevitra hoe iza no tianao hiara-miasa. Izahay koa dia mamela anao handeha amin'ny laoniny ny fandoavam-bola ho an'ny fananana manokana mankany amin'ny tompony, raha tianao ny hampiasa fampiasa toy izany.
Dingana 4: Fikirakirana fiarovana tanteraka
Na dia sarotra aza, azo atao ny manamboatra ny dingana 1-3 amin'ny alàlan'ny fifangaroan'ny rafitra hafa. Na izany aza, iray amin'ireo mampiavaka an'i Zeevou tsy manam-paharoa dia ny ahafahanay manome automatique tanteraka ny kitapom-bolanao.
Azonao atao ny mametraka ny tetiandro arak'izay itiavanao ny fametrahana vola alohan'ny fiarovana alohan'ny famoahana azy, ohatra, iray andro alohan'ny hahatongavany ka hatramin'ny roa andro aorian'ny fiainganao. Afaka misafidy ny vahiny ny karatra mitovy amin'ny karam-panefany na karatra hafa ampiasaina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana fiarovana.
Ny rafitra dia hanandrana manakana ny volan'ny karatra arakaraka ny fe-potoana voatondro, raha tsy mahomby izany dia angatahina ny vahiny hiditra ao amin'ny antsipirian'ny karatra. Raha mila miampanga ny vola arovan'ny fiarovana ianao noho ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny trano na ny fahasimbana ara-batana dia ho azonao atao izany nefa tsy mila miala amin'i Zeevou akory ianao.
Azo atao ny mampiasa vavahady fandoavam-bola hafa ho an'ny fametrahana fiarovana amin'ny iray ampiasaina amin'ny fandoavam-bola.
Dingana 5: Vetting ho an'ny vahiny feno
Mba hahazoana antoka fa voaaro tanteraka ianao raha sendra misy tsy mety dia nanangana fampiraisana izahay Azo zahana, sehatra e-sonia. Io dia ahafahanao mahazo ny fehezanao sy ny fepetra nosoniavinao tamina nomerika. Mandritra izany fotoana izany dia azonao atao ny mangataka amin'ilay vahiny mba hampakatra rakitra iray na maromaro toy ny kinova scann'ny pasipaorony / ID, na ny sarin'ny karany (raha toa ka fomba iray tadiavinao hampiasaina ity - azonao atao ny manamarina indroa ny ara-dalàna amin'ny fanaovana izany eo amin'ny faritra misy anao). Ny fampahalalana rehetra nangonina dia nakarin'i Signable, hiantohana fa tsy ho diso amin'ny fitakiana GDPR ianao.
Raha vantany vao nanao sonia ny fepetra sy fepetra ny vahiny dia hasehontsika izany ao amin'ny Zeevou, ary halefa mailaka ianao miaraka amin'ny kopian'ny maodely vita. Aorian'ny fanaraha-maso ny sonia, ny karatra, ary ny fiantohana fa faly amin'ny famandrihana amin'ny ankapobeny ianao dia azonao atao ny manisy marika ny vahiny ho ID Voamarina ao Zeevou. Ao anatin'ny fizotran'ity dingana ity dia azonao atao ny manamarina raha mampiseho ny famandrihany ao Zeevou ny sainam-bahiny eo an-toerana, ary raha misy sainam-pitaka aseho eo amin'ny vavahady fandoavam-bola raha toa ka omena karatra ilay vahiny.
Raha vantany vao voamarina ny mpitsidika, raha hiverina any amin'ny tranonao izy ireo amin'ny ho avy, dia tsy ho takiana amin'izy ireo ny hamaky fanindroany fanindroany.
Ny fahitana ny famandrihana tokana, ary koa ny lisitra fisavana, dia manome topy maso ny halehiben'ny fahatongavan'ny vahiny tamin'ny famitana ny fizotran'ny famandrihana mandeha ho azy. Ankoatr'izay, eo amin'ny pejy famandrihana dia haseho anao koa ny fampitandremana ataon'ny vahiny eo an-toerana raha misy ny fifanandrinana hita eo amin'ny anaran'ny tanànan'ny vahiny sy ny an'ny trano ary raha toa ka tsy manana orinasa mifandraika amin'izany ny famandrihana (manondro vahiny nasaina) .